Paris St-Germain oo ka Walwalsan XAALADA Neymar kaddib markii…iyo Taagerayaasha United oo Ku faraxsan Aqbaartan Cusub – Gool FM
( Paris ) 24 Jan 2019. Macalinka Paris St-Germain Thomas Tuchel ayaa sheegay inuu ka “ Walwalsan “ Neymar kaddib markii uu ka dhaawacmay anqawka intii lagu guda jiray kulankii Coupe de France ay guusha ka gaareen Strasbourg, iyadoo kaliya seddex asbuuc ay ka harsan tahay cayaarta ay PSG wajaheyso Manchester United koobka Champions League
Neymar ayaa ka baxay garoonka isagoo ilmeynaya kaddib markii uu si xun u qaloocday anqawgiisa daqiiqadii 60-aad.
PSG ayaa u safreysa Old Trafford lugta hore ee wareega 16-ka koobka Champions League 12-ka bisha February.
” Waan ka walwalsanahay, sababtoo ah waa isla cagtii, iyo meeshii,” ayuu yiri Tuchel.
Xiddigii hore ee Barcelona, kasoo u dhaliyay 20-gool dhammaan tartamada xagaagan hogaamiyaasha horyaalka Ligue 1, ayaa ka dhaawacmay isla anqawgii uu la dhaawacmay bishii February ee sanadkii hore taasoo uu garoomada kagama maqnaa intii ka hartay xagaaga, wuxuuna soo laabtay ka hor koobkii adduunka uu xulkiisa matalay.
“waxay aheyd xaalad taaso qalad lagu galay seddax jeer, midba mida ka dambeysa. Garsooraha waxba kama dhigin. Way maroojismatay cagtiisa,” ayuu hadalkiisa ku daray Tuchel.
” Wuxuu joogaa isbitaalka waana inaan sugnaa wax aan ka helino dakhtarka.”